Contemporary, Airy Redwoods & Beach Getaway - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPam
Kuyasivuyisa ukuba sikhethwe kwindawo yesi-3 kwezilishumi eziGqwesileyo ze-AirBnb ngohambo lwe-101.
Siyathemba ukuba uyakulonwabela ulwandle lwakho kunye ne-redwoods ukubaleka kwindawo yethu ethi 'A Street Cottage,' indawo yokulala enamagumbi ama-2 +, igumbi lokuhlambela eli-1 imizuzu ukuya kunxweme olumangalisayo lwaseCalifornia. Iziko elibaswa ngamaplanga, imiqamelo emininzi yokujula kunye neengubo zoboya begusha zenza indawo epholileyo yokurhoxa. Sikwagcina i-fan kunye neyunithi ye-air conditioning yobuqu isesandleni ngeentsuku zasehlotyeni, oko kunye nempepho yolwandle igcina izinto zonwabile.
Ngena ngaphakathi kwaye uya kubuliswa yivayibhile yeyangoku kwaye epholileyo, eneziqwenga zakudala zenkulungwane edityaniswe nobugcisa bemifanekiso emibalabala, kunye nokuhonjiswa kwe-eclectic. Imigangatho yokhuni oluqinileyo, umthi omhle omkhulu kwiyadi yangasemva, kunye nomgodi womlilo onezitulo ze-adirondack zenza oku kube yindawo yakho yokuphumla engaselunxwemeni unyaka wonke.
I-Wifi iyafumaneka, kunye ne-smart TV entsha kraca. Sineti kunye neembotyi zekofu + igrinder ekhoyo kuwe, kunye neswekile ekrwada, iikhrimu (kwifriji) kunye nezimuncumuncu. Ikhitshi egcweleyo ibandakanya iziqholo ezininzi, ioyile yomnquma kunye nokunye ukupheka lula. Ukuba isekhitshini, kukho ukuba uyisebenzise.
4.97 · Izimvo eziyi-262
I-A Street Cottage ikwingingqi yaseBerryessa yeSixeko saseCrescent. Malunga nohambo lwemizuzu emihlanu ukuya elunxwemeni. Uya kubona ezinye izindlu zosapho ezithandekayo ezifuna idyasi yepeyinti, kunye namatye anqabileyo abuyiselwe ngokupheleleyo. Sinegaraji enemoto enye enezitshixo ezifumanekayo ngaphakathi endlwini, kunye neendawo zokupaka iimoto ezimbini. Isitalato sesona sitalato sokufikelela kwindawo yokuhlala, uya kuba nengxolo yesitrato (kodwa hayi kakhulu).
Sinonxibelelwano lweendwendwe oluthandekayo, Tabi, ukuba kukho imiba okanye imeko kaxakeka. Uza kufumana iinkcukacha zakhe xa ubhukisha ubhukisho lwakho. Uyakuhlala unokufikelela kuthi njengabanini!